Vaovao - Ahoana ny fampiasana marina ny lanjan'ny lanjan'ny elektronika Glass CW27
Sehatra elektronika vera vita amin'ny CW275dia refesin'ny lanjany avo lenta miaraka amin'ny sensor 4 marefo, izay afaka mandrefy ny lanjanao bebe kokoa, saingy tsy maintsy mitandrina tsara ianao hampiasa tsara, raha tsy izany dia hitongilana ny lanjany ary hisy fiantraikany amin'ny fandrefesana. Ka ahoana ny fampiasana Scale Elektronika Fatra Elektra Glass CW275 handrefesana tsara ny lanjany?
1. Voalohany indrindra, ny lanjan'ny lanja dia tokony hapetraka amin'ny gorodona fisaka, fa tsy amin'ny karipetra na amin'ny tany malefaka, fa tsy amin'ny toerana misy tsy fanarahan-dalàna avo na ambany, ary tsy amin'ny trano fandroana mando, satria vokatra elektronika io.
2.Ny fotoana handanjana sy hijoroana dia tokony ho marina. Saraho ny tongotra roa nefa aza sakanana ny efijery fampirantiana. Mitsangàna moramora amin'ny tongotra iray, ary miorim-paka amin'ny tongotra iray hafa. Aza mihifikifi-doha na mitsambikina eo amin'ny maridrefy. Aza manao kiraro, ary miezaha mandanja akanjo faran'izay kely araka izay azo atao mba hanakaiky ny lanjanao.
3. Aorian'ny hijoroana dia hanome vakiteny ny seho ary hanome vakiteny hafa aorian'ny fiparitahana indroa, izay ny lanjanao. Avy eo midina indray ary mandanjalanja indray, raha toa ka tsy mitovy amin'ny taloha ny angon-drakitra, dia ny lanjanao izany.
4. Misy tongotra efatra amin'ny ankapobeny ny ambadiky ny refy hametrahana ny tany. Ity no ampahany lehibe amin'ny fandanjana, ny fitaovana milanja lohataona. Ireo tongotra efatra ireo dia tsy maintsy miasa amin'ny fotoana iray mba handanjalanja tsara.
5. Eo afovoan'ny tongotra efatra dia misy fitoeran-bateria, izay ampiasaina hametrahana ny bateria miasa amin'ny refy lanja ary tokony soloina ara-potoana ny bateria. Rehefa tsy misy herinaratra ny bateria dia tsy ho marina ny lanjan'ny lanjany refesina. Raha efa nampiasaina hatry ny ela ny bateria dia hivoaka rano izy io ary hanimba ny faritra. Ka mba soloino ara-potoana ny bateria.
6.Tandremo ny fetra fandrefesana ny refin'ny lanjany. 180 kilao ny fetran'io lanjany io. Aza refesina mihoatra ny refy. Raha tsy izany dia tsy ho vitanao ny mandrefy ny lanjanao ary mety hahavery ny lanjanao. Ka rehefa mividy azy ianao dia tokony hijery ny refy fandrefesana mifanaraka aminao.
Ilaina ny mampivelatra ny fahazarana isan'andro, ary manana lanja amin'ny fotoana voafaritra, ary manaova firaketana an-tsoratra mifanaraka amin'izany.
Ho an'ny fandinihana maharitra, azonao atao ny mandray ny lanjan'ny herinandro na antsasak'adiny ho fampitahana, satria kely dia kely ny fiovana isan'andro.
Teo aloha: Ny fahatongavan'ny vidin-javatra ambany amin'ny fampiasam-bola amin'ny hotely amin'ny valan'aretina dia tsy tonga
Manaraka: Ahoana ny fomba hisafidianana kettle elektrika?